शब्दकोश: पहिलो वर्षगाँठ : अनुभूतिका गाँठाहरू
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, April 03, 2009
एकल यात्री April 04, 2009
ब्लग यात्रा जारी रहोस्
लेखाइ अझै खारिरहोस् ।
aAkaR April 05, 2009
बधाइ तथा शुभकामना छ है !
ब्लगिङ को नशा नै यस्तै हो ।
Basanta Gautam April 05, 2009
पहिलो जन्मदिनको बधाई छ 'Café मङ्गलम्'लाई! र भविष्यको निरन्तरता र अझ सफलताको लागि मुटुदेखिकै शुभकामना! तपाईँको सुन्दर लेखनीको पारखी रहिरहनेछु सधैं।
जिन्दगीलाई निरन्तर परीवर्तनको पर्याय मान्ने ब्लगनै जिन्दगी हो। यस्तै अनुभव छन् मेरा पनि।
मिलन April 07, 2009
निरन्तर अपडेट भै रहेको यो ब्लगमा बारम्बार नयाँ र रमाईलो कुराहरू पढने सिक्ने मौका पाईन्छ ... कहिले नयाँ पोष्ट पढ़न पाईएला भनेर ढुकेर बस्ने हामी जस्तालाइ चाहीं यो बरदान जस्तो नै भएको छ
..भलै धाइबाजीको नयाँ ब्लग सम्म आइपुग्न धेरै मेहनत गरिएको होस... बेला बेला टेम्पलेट र टाईटलमा हुने फेरबदलले प्राय फ्रेस नै बनाउंछ.... साईड इफेक्ट त जेमा पनि हुन्छ नि
>Jotare Dhaiba< April 07, 2009
शुभ कामना र बधाईका निम्ति सबै प्रेमिल मित्रहरूलाई मुरी माया । ब्लगको 'चलखेल' हेर्ने-पढ्ने आँखाबिना बेअर्थ नै हुन्छन् ।
परिवर्तनको साँधमा रहँदै आइपर्ने फरक परिस्थिति स्विकार्नमा Cafe पनि पछि पर्ने छैन ।
अनि मिलनजी, आलोपालो सबै साथीहरूलाई ब्लग ठेगाना परिवर्तनबारे सूचित गर्ने क्रममा तपाईँलाई पनि तपाईँको नयाँ पोष्‍टको टिप्पणीमा रहने गरी यसो भेउ दिने चेष्‍टा तीन-चार बार लगातार गरेको हुँ, तर कसै गरी पोष्‍ट हुन सकेन । ढिलै सही बाटो ठीकै पैल्याउनुभएकोमा खुसी छु, बीचको अलमलको लागि माफी माग्छु ।
Dilip Acharya April 08, 2009
मैले सधैं भन्दै आएको छु मानिस बिचारले नै चिनिन्छ, त्यसैले ब्लगको जन्मदिन भनेको ब्लगरकै जन्मदिन पनि हो ।
मैले हेर्दा एक बर्षको तपाईको यात्रा निकै रोचक, रोमान्चक र रसीलो रह्योहोला जस्तो लाग्छ ।
>Jotare Dhaiba< April 08, 2009
हार्दिक आभार कामनाका निम्ति दाइ ।
समग्रमा रमाइलै भयो एकवर्षे सफर । सबभन्दा मुख्य कुरो त एउटा नयाँ घर बने जस्तो लागेको छ यस दैलोबाट छिरेर । यो घरलाई रोगन, मुस्कान थपिरहनु छ ।